राप्रपाहरू मिल्नु अपहरिर्य छः विन्दा गिरी – TibraKhabar (तीव्रखबर डटकम) छिटो खबरको एउटै विकल्प
राप्रपाहरू मिल्नु अपहरिर्य छः विन्दा गिरी
- December 19, 2019 मा प्रकाशित
विन्दा गिरी केन्द्रीय कार्य सम्पादन समिति सदस्य
राष्ट्रिय प्रजातन्त्रपार्टी (संयुक्त)
यस पटकको उपनिर्वाचन परिणामलाई कसरी लिनु भएको छ ?
सोचे जस्तो परिणाम आएन । यो उपनिर्वाचनमा सत्तारुढ नेपाल कम्यूनिष्ट पार्टी र प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेस बाहेक अन्य दलको खासै राम्रो स्थिति रहेन । संगठन गर्दै जाउँ आगामी निर्वाचनमा हाम्रो पनि राम्रो स्थिति हुनेछ । अब हामी गाउँ–गाउँ, टोल टोल शहर–शहर जानु पर्छ । जनताले रुचाएमा मात्र राम्रो परिणाम आउने हो । जनताले परिवर्तन खोजिरहेका हुन । यस पटक राप्रपाहरूलाई जनताले भरपर्दो दलको रुपमा लिएनन् । सबैतिर संगठन नभएका कारण राप्रपा(संयुक्त)को सोचे जस्तो परिणाम नआएको हो । त्यसो त नेकपाले पहिले जितेको ठाउँमा अहिले काग्रेसले जित्नु भनेको जनताको नेकपा प्रतिको वितृष्णालाई मान्नु पर्छ । जस्तो उदाहरण भक्तपुरमा पूर्व एमालेले जितेको ठाउँमा उपनिर्वाचनमा कांग्रेसले जित्यो ।
राप्रपा (संयुक्त) र राप्रपामिल्नु पर्ने आवाजउठिरहेको छ नि ?
राप्रपा संयुक्त र राप्रपा मिल्नु पर्ने आवाज उठ्नु स्वभाविक हो । पार्टी एकता अपरिहार्य छ । पार्टी एकता हुनु नेतादेखि कार्यकर्ता सबैलाई राम्रो हो । यो आम नेपाली जनताको हितको लागि पनि हो ।
राप्रपाहरू मिल्नु पर्छ कि पर्दैन तपाईको व्यक्तिगत भनाई के हो ?
राप्रपाहरू मिल्नु पर्छ, मिल्न ढिलाई भइरहेको छ । राप्रपा (संयुक्त) र राप्रपा मिलेर वैकल्पिक शक्तिको रुपमा जनतामाझ जानुपर्छ । कांग्रेस प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्न नसकेको अवस्था र नेकपा दुई तिहाइको सरकारले भ्रष्टाचार र अनियमिततालाई संस्थागतगर्दै गएको अवस्थामा राप्रपाहरू राम्रोसंग जनता माझ गए निसंदेह हामी वैकल्पिक शक्ति बन्न सक्छौं ।
राप्रपा (संयुक्त) को वटमलाइन संवैधानिक राजतन्त्र र हिन्दुअधिराज्य हो, तर यसभन्दा पृथक मत राख्ने पार्टी भित्रै देखिन्छ नि ?
हाम्रो पार्टीको वटम लाइनभनेको संवैधानिक राजसंस्था र हिन्दु अधिराज्य नै हो । पार्टीको विधानमा पनि यहि छ । मलाई लाग्छ, यस विषयमा पार्टीमा मतभेद छैन । छिटफुट कसैले पार्टीको वटम लाइन भन्दा पृथक बोले भने त्यो व्यक्तिगत मात्र हो ।
नेपालमा हिन्दु धर्म मान्ने ९० प्रतिशतभन्दा बढी मत छ भनिन्छ तर हिन्दु धर्मलाई वटम लाइन मान्ने पाटीको मतकिन घट्दै गएको हो ?
नेपाली जनताले विकास र परिवर्तन पनि चाहिरहेका छन् । त्यसैले हिन्दु राष्ट्र भनेको सबै नेपालीहरूको आस्थाको धरोहर हो । दुई तिहाइ सरकारले विकास र परिवर्तनको बाटो नहिडेर महँगी, वेरोजगारी, भ्रष्टाचार, अनियमितता, अशान्तिलाई प्रश्रय दिंदै गएकोले अब नेपाली जनताले हिन्दुराष्ट्र र संवैधानिक राजसंस्थालाई अपरिहार्य मानेको अवस्था छ । आफ्नै धर्म संस्कृति र मौलिकतालाई निरन्तरतालाई नयाँ शक्तिको आवश्यकता जनताले महशुस गरिरहेका छन् । त्यो आवश्यकता राप्रपा (संयुक्त)ले पुरा गर्न सक्छ ।
भारतले आफ्नो नक्सामा कालापानी, लिपुलेक, लिम्पुयाधुरालाई पनि राखेको छ, यस विषयमा राप्रपा (संयुक्त) स्पष्ट रुपमा बालेको छैन नि ?
यो विषयमा राप्रपा (संयुक्त) ले आवाज उठाइरहेको छ र खासमा चासो हुनुपर्ने अहिले दुई तिहाई बहुमतको शक्ति भएको सरकार हो । खास रुपमा नेकपा र कांग्रेस यसमा जिम्मेवार बन्नु पर्छ । यस विषयमा उनीहरू नै पहिला अघि बढ्नु पर्छ । यसै मेसोमा हेर्दा त्यहाँका नागरिकहरू पहिले कुन अवस्थामा थिए, अहिले कुन अवस्थामा छन्, त्यो स्पष्ट हुनुपर्छ । त्यहाँका जनप्रतिनिधि के भनिरहेका छन्, त्यो विषय महत्वपूर्ण हो । राप्रपा संयुक्त भने जनतालाई यस विषयमा सजग गराउदै अघि बढिरहेको छ । हामी सरकारलाई ज्ञापनपत्र दिने देखिन सडकमा ¥याली निकाल्ने कार्यक्रमहरू समेत गरिरहेका छांै । यो श्रृखला जारी रहने छ ।
आगामी निर्वाचनसम्म राप्रपा (संयुक्त) लाई राम्रो हैसियतमा पू¥याउन तपाईहरूसंग के के एजेण्डा छन ?
हाम्रो पार्टीलाई राम्रो हैसियतमा पू¥याउनका लागि जनतालाई सजग गराएर अघि बढ्नु पर्छ । संघियताका नाममा जनताले धान्न नसक्ने गरी राष्ट्रलाई खरबौं ऋणमा डुवाएको अवस्था छ । यस्तो अवस्थामा राप्रपा संयुक्तले स्पष्ट भिजन लिएर कार्यकर्तालाई थप सशक्तरुपमा अघि बढाएमा आगामी निर्वाचनमा राम्रो स्थानमा पार्टी पुग्ने छ, अहिले भन्दा पार्टीको स्थान राम्रो
राप्रपाहरूले कम मत ल्याउनुमा पार्टी नेतृत्वको कारण पनि भनिन्छ । यसमा तपाईको भनाई के छ ?
गत निर्वाचनमा जनताले हिन्दु राष्ट्र र राजसंस्था प्रति समानुपातिकमा दिएको मत हेर्दा राप्रपा निर्णायक स्थानमा थियो । त्यो अवसरलाई पार्टी नेतृत्वले सही रुपमा सदुपयोग गर्न नसक्दा र निर्वाचनकै मुखमा पार्टी फुट्नु र पटक पटक सरकारमा गएको कारणले नेतृत्वप्रति आलोचना भएको हो ।
हिन्दु धर्मसंग सम्बन्धित विभिन्न संघ संस्था, धार्मिक संगठनहरूलाई समेट्दै राप्रपा (संयुक्त)ले नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने हो । यसका लागि राप्रपा (संयुक्त)ले समान, विचार र आस्था भएका सम्पूर्ण संघ संगठनहरूलाई समेट्दै पार्टीलाई अग्रणी शक्तिको रुपमा स्थापित गर्नु पर्छ ।
अन्तिममा देशवासीलाई के भन्नु हुन्छ ?
सम्पूर्ण देशवासीलाई अब हाम्रो राष्ट्र र राष्ट्रियताको संरक्षणको लागि संवैधानिक राजसंस्था र हिन्दु अधिराज्य पूनस्थापना गर्न आवश्यकता छ । यहि निरन्तरतासहितको वैज्ञानिक परिवर्तन गर्न सकेमामात्र राष्ट्र समृद्ध हुन सक्छ । त्यसैले राप्रपा (संयुक्त)मा नै आवद्धता जनाउनको लागि सबै देशवासीमा आव्हान गर्दछु ।